Dr. Sheek Muhammad Rashaad: Sheeka keenya guddaa kan uumamaan hayyuu | Oromo Freedom News and Views
← Sababaa Gaaffii Mirgaa Gaafataniif Jecha Badii Tokkoon Malee Yuuniversitii Finfinnee Irraa Barattooti Oromoo 33 ol Kanneen Ta’an Arihaman
Introducing New Oromo TV Based in Oslo, Norway – “TV ORO →
Dr. Sheek Muhammad Rashaad: Sheeka keenya guddaa kan uumamaan hayyuu
Kan barreesse: Najiib Zannuun*
Kan inni dhalate, kudha sagal soddomii afuritti
Haati isaa Faxumaa, intala shurraati
Bakki dhalootaa Oromiyaa, Carcar keessatti
Sheik Bakrii Saphaloo isas dabalatee
Beekkumsa jajjabaa achirraa horate.
Hayyama gaafate abbaa bira gahee
Innis ni eebbise addaan bahuuf nahee
Yaman tarkaanfatuun Su’udii dhaqee
Lubnaaniif Masrittis garasumaan maqee
Doktarummaa isaa itti badhaafame.
Waan isaan nuuf godhan himamee hin dhumuu
Irrumaan tuttuqaa haa dhagayuu namuu
Arra guyyaa keessaa if waa hin barree
Uumamumaan Rabbiin keessatti unkure
Baradheen barsiisaaf tabba bahee raaree
Rakkoo adda addaa hunda jala taree
Kunoo arraan tana hedduut irraa bare.
Yeroo dubbatanii yakkatti laalaman,
Biyya Somaalerraa raadiyoon dhawwaaqan.
Bara shantam dura kan inni dubbate
Mee akkaan hubadhu yoo qalbii qabaatte
“Bar seenaa kan kee baratuun si qabee
Namni seenaan qabne nama jiruu dhabee
Bar seenaa ifii baratuun wajabee
Namni seenaan qabne nama bakka dhabee
Yoo seenaan kan kee isa jabaa tayee
Bar ati dureessaa nama samii bayee
Yoo amanti’iin dura ati jabaa taate
Eega amanti’iitii sumaaf aduun baate”.
Akkas jechuudhaan dhaamsa dabarsate.
Waggaa meeqa guutuu itti ifaajanii
Afaan Oromootti qur’aana hiikanii
Sagalee qulqulluun gurra nu buusani.
Kana qofaa miti gumaachi isaanii
Kitaaba adda addaas hedduu maxxansanii
Jiraadhuu nuuf turi dheeradhu umriinii.
Galata kee haa galchu Rabbiin jannataanii
Kan dhugaa dubbatu isa hin kijibne
Kan haqa malee dharaaf raga hin bane,
Namaat jala deema malee kan nama jala hin deemne,
Horii fi bu’aadhaaf dantaa kan hin qabne,
Soda diinaatiif qishif kan hin janne,
Nuuf turi daranuu sumaan bayyanannee.
Nuti si jaalanna dhugaan onnerraahii
Umrii dheertuun barayyuu jiraadhu
Bakka yaadde gahii wahayyuu argadhu!
Kan si hordofee bobba’u
Si faana deemee haa milkaa’u
Kan si jibbu hundi haa du’u
Hayyuun akka keetii bakka san haa bu’u.
Mil’uun kee diina haa kuffisu
Waaqni adawwii tee haa dhamaasu!
Akkuma kanaan itti fufi
Nyaapha keenyatti karaa cufi
Diina kee wareersi!!